Home Wararka Ciidamada Dowlada oo howlgalo ka sameeyay deegaano ka tirsan Gobolka Sh/hoose
Ciidamada Dowlada oo howlgalo ka sameeyay deegaano ka tirsan Gobolka Sh/hoose
Ciidamo ka tirsan Kumaandooska Gorgor oo howlgalo ka sameeyay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Sh/hoose ayaa sheegay iney gacanta kusoo dhigeen dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab.
Howlgalada ayaa la sheegay in ciidamada Kumaandooska Gogor ay si gaar ah uga sameeyeen deegaanada kala ah Tooratoorow, Bariire, Jowhar yareey, Shaam Gumare iyo Mubaarak oo dhamaantood ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Taliyaha guutada 17-aad ee ciidanka Kumaandooska Gorgor Dayax Cabdi Cabdulle oo hoggaaminaayay ciidanka howlgala fuliyay ayaa warbaahinta u sheegay iney kuso qaqabteen howlgalka lix ka mid ah dagaalyahanada Al-shabaab.
Saraakiisha Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Sh/hoose ayaa sidoo kale sheegay in howlgalada ay kula dagaalamayaan Al-shabaab iney sii socon doonaan, ilaa ay ka saarayaan dhamaan deegaanada gobolka, waa sida ay hadalka u dhigeene.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka dagaalamayaasha Al-shabaab ee ku aadan howlgalada ay sheegeen saraakiisha Gorgor iney kusoo qabqabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-shabaab.
Previous articleG/ ku Xigeenka Gobolka Hiiraan oo Muqdisho ku geeriyooday
Next articleMagalaada Baladweyne oo ay ka jirto cabsi dagaal
Gaari walxaha Qarxa lagu soo xiray oo ku qarxay Muqdisho